महानगरले वितरण गरेको चामलको विषयमा अनुसन्धान शुरू
प्रस, वीरगंज, १८ वैशाख/ वीरगंज महानगरपालिकाले वडा नं १४ पिपरामा पठाएको दोस्रो चरणको राहत सामग्रीमा चामल कुहिएको फेला परेको छ। वडाध्यक्ष्F भरतप्रसाद कुर्मीले दोस्रो चरणको लागि महानगरपालिकाले पठाएको राहत सामग्रीमा चामल कुहिएको फेला परेको बताएका छन्। राहतको चामलको बोरामा उत्पादक न्यू बोलबम राइस मिल र सुरज खाद्य उद्योग उल्लेख छ। वडाध्यक्ष कुर्मीले ९५० किलो चामल गुणस्तरीय नभएपछि महानगरपालिकामा फिर्ता पठाएको बताए। यसैगरी, महानगरले पठाएको चामलको तौल पनि कम भएको उनले आरोप लगाएका छन्। वडाध्यक्ष्F कुर्मीले ३० किलो तौल लेखेको बोरामा २४ किलो ६ सय ग्राम चामल भएको बताए। राहतको लागि आएको चामल प्याक गरेर वितरणको तयारी गर्दा चामल गुणस्तरहीन देखिएको उनले बताएका छन्। यसैगरी, शङ्का लागेर चामलको तौल गर्दा कम तौल भेटिएको उनले बताए । वीरगंज महानगरका नगरप्रमुख विजयकुमार सरावगीले सप्लायर्सको लापर्बाहीको कारण गुणस्तरहीन र कम तौल चामल आएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले यसअघि पनि सप्लायर्सले गुणस्तरहीन एक ट्रक चामल पठाएको र आफूले फिर्ता गरेको बताए। उनले महानगरले साढे चार सय टनभन्दा बढी चामल खरीदक
नारायणी कोभिड अस्पताल भएपछि विवाद शुरू गण्डक अस्पताललाई स्वीकृति दिन ढिलाइ
प्रस, वीरगंज, १८ वैशाख/ नारायणी अस्पताललाई केन्द्र सरकारले कोभिड अस्पतालमा परिणत गरेपछि अहिले यो विषयलाई लिएर राजनीतिक दल र नागरिकले विरोध शुरू गरेका छन्। केन्द्र तहबाट नारायणी कोभिड अस्पताल घोषित भएर अस्थायी कोभिड अस्पतालको रूपमा गण्डक अस्पतालसँग स्थानीय तह वीरगंज महानगरपालिकाले सम्झौता गरेपछि नारायणी कोभिड अस्पतालको विषयलाई लिएर अहिले विवाद बढेको हो। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण शुरू भएपछि चैत ६ गतेभित्र सबै प्रदेशले कोभिड अस्पताल सञ्चालनको तयारी गरेका थिए। तर प्रदेश २ मा कोभिड अस्पतालबारे कुनै तयारी गरिएन। कोभिड–१९ सङ्क्रमित फेला परेपछि केन्द्रीय सरकारले नारायणी अस्पताललाई कोभिड अस्पताल घोषित गरेको थियो। नारायणी अस्पताललाई कोभिड अस्पतालमा परिणत गरेर त्यहाँका बिरामीहरू नेशनल मेडिकल कलेजमा पठाइएपछि अहिले यस विषयमा विवाद भएको हो। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा, जनता समाजवादी पार्टीलगायतले नारायणी अस्पताललाई पूर्ववत्रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने भन्दै विज्ञप्तिबाजी शुरू गरेका छन्। यसैगरी, नागरिकबाट पनि नारायणी अस्पताललाई पूर्ववत्रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग भइरहेको छ। नारायणी अस्पतालका म
कुनै लक्षण नदेखिएको व्यक्तिमा सङ्क्रमण भेटियो
विमला गुप्ता, वीरगंज, १८ वैशाख/ कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कुनै लक्षण नदेखिएको व्यक्तिमा पनि कोरोनाको सङ्क्रमण भएको हुन सक्छ भन्ने तथ्य पुष्टि भएको छ। बुधवार बाराका दुईजनामा कोरोना सङ्क्रमण भएको रिर्पोट आएपछि सो कुरा पुष्टि भएको हो। बाराको जीतपुरमा एकजना र सिम्रौनगढमा एकजना गरी दुईजनामा कोरोना सङ्क्रमण देखियो। तर उनीहरूमा कोरोना सङ्क्रमणको कुनै लक्षण नदेखिएको क्वारेन्टाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताएका छन् । कोरोना (कोभिड–१९) सङ्क्रमणका विभिन्न लक्षणहरू हुन्छन्। सुक्खा खोकी हुनु, रुघा लाग्नु, निमोनिया हुनु, श्वासप्रश्वास छिटोछिटो हुनु, १०४ डिग्री फरेनहाइटभन्दा बढी ज्वरो आउनु, हाच्छ्यूँ आउनुलगायतका लक्षणहरू कोरोना सङ्क्रमितहरूमा देखिने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)ले जनाएको छ। तर बाराका दुईजनामा यस्ता कुनै पनि लक्षण नदेखिएको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ उद्धृत गर्दै बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले बताएका छन्। “ती दुईजना सङ्क्रमितमा कोरोनाको कुनै लक्षण फेला परेको छैन। हेर्दा दुवैजना तन्दुरुस्त हुनुहुन्छ,” प्रजिअ पण्डितले भने । बाराको मात्रै होइन
बगहीमा तीसजनाद्वारा रक्तदान
प्रस, वीरगंज, १८ वैैशाख/ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, बगही शाखाको आयोजनामा शुक्रवार सम्पन्न रक्तदान कार्यक्रममा तीसजनाले रक्तदान गरेको रक्त सञ्चार केन्द्र वीरगंजका प्रमुख सौरभराज पाण्डेले बताए। वीरगंज महानगर–२८ बगहीमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रम शाखा सभापति रामनरेश यादवको अध्यक्षतामा भएको र प्रदेशसभा सदस्य सिंहासन साह कलवारले उद्घाटन गरेका थिए। लकडाउनमा रगत अभाव भएको कारण रक्तदान गरिएको शाखा सभापति यादवले बताए। रक्तदान कार्यक्रममा जितेन्द्र कुशवाहा, सुजीत पटेलको टोलीले प्राविधिक सहयोग गरेको थियो।
बारामा कोरोना देखिएपछि पर्साको बडनिहार बजार बन्द
प्रस, बिरुवागुठी, १८ वैैशाख/ पर्सागढी नगरपालिका–३ स्थित बडनिहार बजार बिहीवारदेखि सात दिनको लागि पूर्णरूपमा बन्द गर्ने निर्णय भएको छ। आज बिहान उक्त बजारका व्यापारीहरूको भेलाले सो निर्णय गरेको हो। नेपाल सरकारले कोरोना भाइरसका कारण लगाएको लकडाउन केही दिनदेखि पर्साको ग्रामीण भेगमा खुकुलो देखिएको थियो। पर्साको पूर्वी भेगको मुख्य बजार जीतपुरका एकजनामा हिजो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि बडनिहारका बासिन्दाहरू पनि सतर्क भएका हुन्। आज दिउँसो १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी वैशाख २५ गतेसम्मको लागि सम्पूर्ण व्यापार, व्यवसाय, बैंक, लघुवित्त, सहकारी संस्थासमेत बन्द गर्ने र अति आवश्यक सवारीसाधनबाहेक अन्य कुनै पनि सवारीसाधन चल्न नदिने भेलाले निर्णय गरेको छ। भेलाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भए नभएकोबारे अनुगमन तथा समन्वयनको लागि वडासदस्य अरुणप्रकाश रेग्मीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिका सदस्यहरूमा दीनदयाल दाहाल, वीरेन्द्र चौधरी, सुकमान तामाङ, सुनील तिमल्सिना, शम्भु दास थारू, टकबहादुर क्षेत्री छन्। समितिले लकडाउनको अवज्ञा गर्ने जोकोहीलाई पनि सामाजिक तथा आर्थिक कारबाई ग
नगरपालिकालाई सहयोग हस्तान्तरण
प्रस, रौतहट, १८ वैशाख/ मौलापुर नगरपालिका–५ निवासी बद्री साहले २५ हजार २ सय रुपैयाँ गरीब तथा ज्यालादारी गरी खाने परिवारलाई राहत वितरण गर्न नगरपालिकालाई चेक हस्तान्तरण गरेका छन्। घरभाडाबापत एक महीनाको आम्दानीबराबर सो रकम उनले नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। बद्री साहको सो घर मौलापुर नगरपालिकाको कार्यालयले भाडामा लिएको छ।
राहत माग गर्दै गापा अध्यक्ष्F घेराउ
प्रस, सेढवा, १८ वैशाख/ राहत माग गर्दै जीराभवानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रीत महतोलाई बिहीवार पुनः घेराउ गरिएको छ। सो गापा वडा नं १, ३ र ५ नं वडाका अध्यक्ष, परिषद् सदस्य साथै नागरिक अगुवाहरूले गापा अध्यक्ष महतोलाई दबाबस्वरूप ज्ञापनपत्र बुझाउँदै घेराउ गरेका हुन्। वडाध्यक्ष शेख नूमान आजम र दारा सिंह राउत थारूको अगुवाइमा रहेको टोलीले लक्षित वर्गलाई अविलम्ब राहत वितरण गर्न माग गर्दै अध्यक्ष महतोसँग राहत माग गरेका थिए । केन्द्र र प्रदेश सरकारले असङ्गठित क्षेत्रका मजदूर, असहाय, विपन्नलाई राहत वितरण गर्न निर्देशनसहित बजेट पठाउँदा पनि गापाले राहत नदिएको लक्षित वर्गको गुनासो छ। प्रदेशले पठाएको रकम गापाको वडा नं २ र ४ मा बाँड्दा सिद्धिएकोले बाँकी रहेका वडाहरूका लागि गाउँपालिकाको बजेटबाट रकम विनियोजन गरी वैशाख महीनाभित्र राहत वितरण गर्ने अध्यक्ष महतोले बताए। तीन दिनभित्र राहत वितरण नगरे गाउँपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने तयारी रहेको जनता समाजवादी पार्टीका स्थानीय नेता नेसार समानीले चेतावनी दिए। सो गापाको वडा नं १ वडा कार्यालयमा भने नेकपाका समर्थकहरूले राहत सामग्री माग गर्द
चौपायाहरूलाई पनि भोजनको व्यवस्था
प्रस, वीरगंज, १८ वैशाख/ लकडाउन अवधि बढेसँगै वीरगंज महानगरमा निश्शुल्क भोजन गराउँदै आएका संस्थाहरूमध्ये केहीले मानिसपछि चौपायाहरूलाई पनि भोजन गराउन शुरू गरेका छन्। वीरगंज युवा समाजले पनि छाडा चौपायालाई भोजन गराउन शुरू गरेको छ। समाजले बुधवारदेखि भोजन छाडा चौपायालाई भोजन दिन शुरू गरेको बताए । पहिलो दिन १० वटा गाई र डेढ सयभन्दा बढी कुकुरलाई विभिन्न वडामा पुगेर भोजन गराएको समाजका अध्यक्ष कमल चौगाईंले बताए। उनले कुकुर, गाईलाई पाउरोटी खुवाउँदै आएको बताए । साहेब दरबार सेवा संस्थानले पनि छाडा चौपायाहरूलाई भोजन गराइरहेको संस्थानका राजेशमान सिंहले बताए। उनले दैनिक १० वटा गाईलाई भोजन गराइरहेको बताए।
लकडाउन पालना गराउन युवाहरू सक्रिय
प्रस, सिम्रौनगढ, १८ वैशाख/ सिम्रौनगढमा लकडाउन पालना गराउन युवाहरू सक्रिय भएका छन्। लकडाउन अवधिमा सामाजिक दूरी कायम गरेर किनमेल गर्नुपर्नेमा यहाँका पसलहरूमा प्रहरी देखेपछि दूरी बनाउने र प्रहरी नभएपछि दूरी कायम नगरेपछि युवाहरू सक्रिय भएका हुन्। सिम्रौनगढ बजारमा बिहान सात देखि दश बजेसम्म र दिउँसो अत्यावश्यक वस्तु खरीदका लागि समय तोकिएको छ। यो समयमा प्रहरी सक्रिय भएको बेला सामाजिक दूरी बनाएर सामान खरीद गर्ने गरिए पनि प्रहरी नभएको बेलामा जथाभावी भीड हुन थालेपछि युवाहरू सक्रिय भएका हुन्। युवाहरूको समूहले प्रहरी नभएको बेलामा सामाजिक दूरी बनाएर सामान खरीद गर्नको लागि सघाउ पु¥याउँदै आएका छन्। अरविन्द महतो, मनोज सर्राफ, अजित महतो, मनिर आलम, सञ्जय गुप्ता, मुन्ना महतोलगायतका युवाले निर्धारण गरिएको समयमा सामाजिक दूरी बनाएर मानिसहरूलाई सामान खरीद गराउने कार्य गर्दै आएका छन्। यसैबीच, सिम्रौनगढ नपाका एकजनामा कोरोना सङ्क्रमण फेला परेपछि बिहीवारदेखि प्रहरीले अत्यावश्यक वस्तुको बिक्री बन्द गराएको छ। औषधिबाहेक आज सबै पसल प्रहरीले बन्द गरायो। सिम्रौनगढलाई सील गरिएको कारण आज औषधिबा
आवाज एफएमद्वारा कर्मचारीलाई राहत
प्रस, वीरगंज, १८ वैशाख/ वीरगंजबाट प्रसारण हुने आवाज एफएम ८८ मेगाहर्जले लकडाउनमा कर्मचारीहरूलाई तलब वृद्धि गरेर राहत प्रदान गरेको छ। एफएम नाफामा रहेको कारण त्यहाँ कार्यरत सबै तहका कर्मचारीको निर्धारित तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको सञ्चालक श्याम बन्जाराले बताए। लकडाउन अवधिमा कर्मचारीहरू निरन्तर खटिरहेकाले उनीहरूको मनोबल उच्च बनाउन प्रोत्साहनस्वरूप लकडाउन अवधिमा १० प्रतिशत तलब वृद्धि गरिएको उनले बताए। आवाज एफएममा २२ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको वउनले बताए।
निजगढ नगरपालिकामा स्वास्थ्य चेकजाँचमा कडाइ
प्रस, निजगढ, १८ वैशाख/ जीतपुरसिमरा र सिम्रौनगढमा बुधवार एकै दिन दुईजनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि निजगढ थप कडाइ गरिएको छ। निजगढ प्रवेश गर्ने मुख्य नाका बकैया पुल र भमरा पुलमा स्वास्थ्य डेक्स खडा गरी राजमार्गमा प्रवेश गर्ने सवारीसाधनलाई विसङ्क्रमित गर्नुका साथै यात्रुहरूको तापक्रम चेकजाँचमा कडाइ गरिएको छ। सो कार्यमा निजगढका सामाजिक सङ्घसंस्थाहरूको सहकार्य रहेको युथ अफ निजगढकी अध्यक्ष गङ्गामाया श्रेष्ठले बताइन्। लकडाउनको पूर्णरूपमा पालना गर्न आग्रह गर्दै जुनसुकै सवारीसाधनलाई विशेष निगरानी बढाएको कोरोना भाइरस महामारी विपद् व्यवस्थापन समिति निजगढका संयोजक नवीन खनालले बताए । राजमार्ग भएर गुड्ने सानाठूला सवारीसाधनमा सवार यात्रीहरूलाई निजगढमा रोकी सुरक्षाका उपायहरू अपनाए नअपनाएकोबारे निगरानी गरिएको छ। मास्कको प्रयोग, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, अतिआवश्यक कामबाहेक घरबाट बाहिर निस्कन नदिनेलगायत नेपाल सरकार र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको अपीललाई पालना गर्न लगाइएको संयोजक खड्काले बताए।
प्रिय मानव, आफू काम (म्गतथ)मैं रहेर तिमीलाई सम्झिरहेको छु। तिम्रो हालखबर म सोध्दिनँ, मलाई थाहा छ, तिमी जीवनको परीक्षा दिइरहेका छौ। मेरो पत्र पाउँदा तिमीले दुश्मनको पत्र ठान्ने नै छौ। तर न म तिम्रो दुश्मन हुँ, न कुभलो नै चिताउँछु। केवल उसले पठाएको कर्तव्यबोधमा म छु। मेरो जन्म वुहानमा हुँदा बच्चै छ भन्दै खेलाँची सम्झियौ। मलाई सानैमा संसार घुम्ने मन नै थिएन, तिमीले नै विकास, प्रविधि, मेलमिलाप, भाइचाराको नाटक ग¥यौ र त्यसैको आडमा मैले संसार डुलें। तिमीले मलाई नदेख्ने अनि तिमी मलाई मन पर्ने, म तिमी सँगसँगै घुमें। आदिमकालमा तिमी आउँदा बाचा नै गरेर आएका रहेछौ, म पञ्चतŒव (आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी)लाई शुद्ध राखेर नै वंश वृद्धि र विकास गर्ने छु। तर सम्पूर्ण चराचर जगत् आआफ्ना गति र नियममैं रहे, तिमी आफू सर्वश्रेष्ठ र विवेकशील भएर पनि संसार जित्छु र अन्तिम भोज मनाउँछु भन्ने दौडमा रह्यौ। तिम्रै कारण तिमीमाथि मात्रै परीक्षा लिनुपर्ने भयो। तिम्रो तयारी जस्तै हतियार युद्ध त म गर्न सक्दिनँ किनकि तिमीसँग आणविक हतियारको खानी नै छ। तर सानै भएर पनि तिम्रो जगत् ध्वस्त पार्न सक्ने क्षमता भने म
दाल प्रकरणः अभियुक्तहरूको बयान जारी
प्रस, वीरगंज, १८ वैशाख/ दालको कालोबजारी गरेको कसूरमा पक्राउ परेका दुईजना सञ्चालक र तीनजना प्रतिनिधि गरी पाँचजनासँग जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाराले बयान लिनेक्रम जारी छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक गौतम मिश्रले अभियुक्तहरूसँग बयान लिने र अनुसन्धान कार्य जारी रहेको बताए। प्रहरीले वैशाख १५ गते परवानीपुर गाउँपालिका–४ स्थित नारायणी मोडर्न पल्सेस इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक वीरगंज–१० आदर्शनगर निवासी मोहनलाल अग्रवाल, उनका प्रतिनिधि सुनील शर्मा, छातापिपरास्थित कृष्ण आधुनिक दाल उद्योगका सञ्चालक वीरगंज–५ निवासी पवन भन्ने त्रिभुवनकुमार साह, निजका प्रतिनिधि सुरेश साह तथा लिपनीमालस्थित महावीर ओभरसिज प्रालिका प्रतिनिधि सन्तोष झालाई पक्राउ गरेको थियो। निजहरूलाई मुसुरोको दाल बिक्री गर्दा निर्धारित मूल्यभन्दा बढी मूल्य लिएर बिक्री गरेको कसूरमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय वीरगंज पर्साले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्र लेखेको र बाराका प्रजिअले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारामा पत्रद्वारा
सीमा पार गर्न खोज्ने आठजना नेपाली पक्राउ
राजेश केसरीवाल, रक्सौल, १८ वैशाख/ भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने आठजना नेपालीलाई एसएसबीले पक्राउ गरेको छ। कोरोना भाइरसको कारण भारत–नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सील भएपछि लकडाउन उल्लङ्घन गरेका आठजना नेपालीलाई बुधवार भारत–नेपाल सीमा पिलर सङ्ख्या ३९०/२८ प्रेमनगरस्थित मैत्रीपुलबाट एसएसबीका जवानले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका आठजना नेपालीलाई हजारीमल उच्च विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा राखिएको एसएसबीले जनाएको छ। पक्राउ परेका नेपालीहरू भारत, सासाराममा काम गर्दथे। पैसा सकिएपछि उनीहरू पैदल हिंडेर रक्सौल पुगेका थिए । पक्राउ परेका नेपालीहरू लहानको सिसवानी, गणेशपुर, सिरहा, सप्तरीका रहेको बताइएको छ।
स्रोत नखुलेको साढे ११ लाखसहित एकजना पक्राउ
प्रस, वीरगंज, १८ वैशाख/ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साले स्रोत नखुलेको रु ११ लाख ५० हजारसहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। लकडाउनको बेला वीरगंज भन्सारबाट मोटरसाइकलमा आउँदै गरेका एकजनालाई चेकजाँच गर्नेक्रममा निजबाट सोबराबरको रकम बरामद भएको जिप्रका, पर्साले जनाएको छ। इनर्वा प्रहरी चौकीको टोलीले वीरगंज–१६ रजतजयन्ती चोकमा चेकजाँच गर्दा मोटरसाइकलमा सवार सोही ठाउँ निवासी लालबाबू यादवबाट साढे एघार लाख रुपैयाँ बरामद भएको जिप्रका, पर्साले जनाएको छ। प्रहरीले रकमको स्रोत खोज्दा उपलब्ध नगराएको कारण निजलाई नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक कानूनी कारबाई अगाडि बढाएको जिप्रका, पर्साले जनाएको छ। यसैबीच, वीरगंज भन्सार एजेन्ट सङ्घले पक्राउ परेका यादव भन्सार क्लियरिङ एजेन्ट भएको बताएको छ। सङ्घले यादवको एमएआर क्लियरिङ सेवा नं. ४०७ भएको र नेपालमा आयातीत चामलको भन्सार छुटाउनको लागि सो रकम राखेको बताएको छ। सङ्घले प्रहरीले हुन्डी कारोबारी भनेर गलत प्रचार गरेको र भूmटो विवरण दिएर फसाउन खोजेको भन्दै अविलम्ब रिहाइको माग गरेको छ।
सङ्क्रमितको सम्पर्कमा रहेकाहरूको स्वाब सङ्कलन
प्रस, रौतहट, १८ वैशाख/ रौतहटमा कोरोना सङ्क्रमण भेटिएका दुईजनाको सम्पर्कमा रहेकाहरूको पहिचान गरेर स्वाब सङ्कलन भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका सूचना अधिकारी शशी दासले बताएका छन्। वृन्दावन नगरपालिका र देवाही गोनाही नगरपालिकामा कन्ट्याक्ट ट्रेसिड्ढो आधारमा स्वाब सङ्कलन भइरहेको उनले बताए। वृन्दावन नगरपालिकामा १ र देवाही गोनाहीमा १ गरी गत मङ्गलवार दुईजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। दुवैको उपचार वीरगंजमा भइरहेको छ। सङ्क्रमितहरूबाट थप अन्यमा सङ्क्रमण भए नभएको पहिचान गर्न स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षणको लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकु पठाइने सूचना अधिकारी दासले बताए। स्वाब सङ्कलनको लागि स्वास्थ्यकर्मीहरूको समूह सम्बन्धित नगरपालिकामा पुगिसकेका छन् । रौतहतमा तीनजनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि उनीहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर ४६ जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले जनाएको छ। कोरोना सङ्क्रमण भएका व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा रहेका ४६ जनाको स्वाब सङ्कलन भएको रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले बताए । वृन्दावन नगरपालिकाका २० जना, देवा
मदिरा ओसार्ने पक्राउ
प्रस, निजगढ, १८ वैशाख। निजगढ नगरपालिका–७ स्थित रवि कोल्ड स्टोरका सञ्चालक रामबाबू रौनियारलाई बुधवार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। हिजो जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले ८ दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान थाल्न आदेश दिएको छ । दुई दिनअघि ‘लकडाउन’को मौका छोप्दै खाद्यान्न बोक्ने गाडी लेखिएको ना.१ क ६०२७ नम्बरको ट्रकमा बबई स्पेशल ब्रान्डको सोफी मदिरा ५० कार्टुन पसलमा झार्दै थियो।
बारामा सङ्क्रमित देखिएको क्षेत्र सील
प्रस, कलैया, १८ वैशाख/ बुधवार बारामा दुईजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि उनीहरूको बसोबास क्षेत्र सील गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले जानकारी गराए अनुसार जीतपुर बजारदेखि पूर्व आमाडार तथा इनर्वासिरा क्षेत्र सील गरिएको छ। कोरोनाको सङ्क्रमण अन्यत्र फैलिन नदिन जीतपुरसिमराको वडा नं ७ र १९ को इनर्वालाई सील गरिएको बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले बताएका छन्। वडा नं ७ का सङ्क्रमितहरूको सम्पर्कमा आएका परिवारजन र इनर्वाका मौलानाको सेवामा रहेका एकजनालाई पनि क्वारेन्टाइनमा पठाइएको उनले जानकारी गराए। “सील गरिएका क्षेत्रबाट कुनै पनि व्यक्ति बाहिर जान नपाउने र अन्यत्रबाट पनि सील गरिएको क्षेत्रमा प्रवेश गर्न रोक लगाइएको छ। उल्लङ्घन गर्नेमाथि कारबाई हुन्छ,” प्रजिअ पण्डितले बताए । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा कडाइ गर्नुका साथै राहत वितरणमा पनि थप सावधानी अपनाइएको उनले दाबी गरे। बारामा भेटिएका दुवै सङ्क्रमितको यात्रा विवरण अध्ययन गरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ शुरू गरेको बाराका प्रहरी नायब उपरीक्षक गोविन्द पुरीले बताएका छन् । उनले सम्भवतः शुक्रवारदेखि नै सङ्क्रमितको सम्पर्
कोरोनाको कहरः रेमिट्यान्समा असर
शीतल महतो कोरोना भाइरस (कोभिड—१९)को विश्वव्यापी महामारीका कारण यो वर्ष नेपालको रेमिट्यान्स आयमा कमी आउने निश्चित छ। चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स कम्तीमा १० प्रतिशत घट्ने प्रक्षेपण नेपाल राष्ट्र बैंकको छ। तर विश्व बैंकले विश्वभर रेमिट्यान्सको प्रवाहमा २० प्रतिशत कमी आउँदा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स भने १४ प्रतिशत घट्न सक्ने आकलन गरेको छ। वैदेशिक रोजगारमा रहेका लाखौं नेपाली कामदारको रोजगार कोरोनाका कारण जोखिममा छ। थुप्रै मुलुकले श्रमिक कटौतीको नीतिसमेत लिइरहेका छन्। यसबाट नेपालको रेमिट्यान्स आय दुई अङ्कको दरमा घट्ने अनुमान गरिएको छ। यसले रेमिट्यान्समा निर्भर परिवारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विश्व बैंकको विश्लेषण छ। रोजगारका लागि धेरै नेपाली युवा जाने खाडी मुलुक (साउदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, ओमान, बहराइन), मलेसिया, युरोप, अमेरिका र छिमेकी मुलुक भारतसमेत अहिले कोरोनाबाट प्रभावित भएका छन् । यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्ने निश्चित छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार कोरोना भाइरसका कारण खाडी मुलुक र मलेसियामा
क्रमिक र व्यवस्थितरूपमा बन्द खोल्नुपर्छ
विश्वराज अधिकारी चारवटा तŒव (प्राकृतिक स्रोत–भूमि, श्रम, पूँजी र सङ्गठन (उद्यमी)लाई कुनै पनि अर्थव्यवस्थामा उत्पादनका साधनको रूपमा लिने गरिन्छ। वस्तु वा सेवा, कुनै पनि कुरा उत्पादन गर्नका लागि यी चारवटा वा यीमध्ये केही तŒवको आवश्यकता पर्दछ। यी तŒवको अभावमा कुनै पनि देशको अर्थव्यवस्थाले गति पाउन सक्तैन। स्थिर हुन पुग्छ। प्राकृतिक स्रोत, श्रम, पूँजी र सङ्गठनमध्ये उत्पादनको कुन साधन महŒवपूर्ण होला त ? यो प्रश्नको उत्तर दिने सन्दर्भमा धेरै विवाद पाइन्छ। कसैकसैले पूँजीलाई ज्यादै महŒवपूर्ण मान्ने गर्छन्। उनीहरूको तर्क अनुसार पूँजी नभएमा श्रमको उपयोग कुनै पनि हालतमा गर्न सकिंदैन । श्रमले मात्र पूँजीको उपयोग गर्दछ। तर कसैकसैले भने श्रमलाई सर्वाधिक महŒवपूर्ण मानेको पाइन्छ। उनीहरूको तर्क अनुसार श्रमले नै पूँजी निर्माण गर्दछ किनभने पूँजीको निर्माण आयको असमान वितरणले गर्दा हुन्छ। अर्थात् असमान आय वितरण पूँजीको जनक हो। कुनै व्यक्ति वा संस्था असमान आय वितरण गरेर पूँजीपति हुन पुगेको हुन्छ। यस्तो विश्वास गर्नेहरू धेरै छन्। श्रमलाई उत्पादन व्यवस्थाको प्रमुख साधन (केहीको मतानुसार) मानिए त
आज मई दिवस, अर्थात् मजदूर दिवस। मजदूर ती हुन्, जो सधैं कमाउँछन्, अनिमात्र खान पाउँछन्। यद्यपि अहिले उद्योगहरूको वृद्धिले केही खास मजदूरहरूलाई सधैं कमाउने अनिमात्र हातमुख जोर्न पाउने समस्या छैन। तर खेतिहर मजदूरलगायत अन्यान्य क्ष्Fेत्रमा काम गर्ने मजदूरहरू भने आज पनि ‘दिउँसो कमाऊ बेलुका खाऊ’को अवस्थामा छन्। ठेला–रिक्शा चलाउने, ट्रान्सपोर्टमा सामान ओसारपसार गर्ने, इँटाभट्टाजस्ता ठाउँमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूरहरूको लामै शृङ्खला छ। नेपालजस्तो देशमा यस्ता मजदूरहरू सङ्गठित पनि छैनन्। यसर्थ यिनीहरूलाई मई दिवस के हो, यसको महŒव के हो भन्ने जानकारी पनि छैन। यस्तोमा ‘मई दिवस’ ठूला उद्योगमा काम गर्ने, राजनीतिक दलको संरक्ष्Fण पाएर खुलेका मजदूर सङ्गठनहरूमा आबद्ध मजदूरहरूको मात्र पर्व बन्ने गरेको छ। जो सङ्गठित छन्, तिनीहरूसँग शक्ति छ, पछाडि राजनीतिक दलहरूको धाप छ, ती आजीविकाका लागि ढुक्क छन्, तर असङ्गठित क्षेत्रका मजदूरहरू भने लाचार र विवश छन्। उनीहरूको आजीविकाको कुनै प्रत्याभूति छैन। हुनत सरकार सबैको हो भनिन्छ तर सरकारले ती मजदूरलाई मात्र हेर्दछ, जो आफ्नो पार्टीको छत्रछायामा हुर्केको
२०७७ वैशाख १८ गते बिहीवारको प्रतीक दैनिक
पर्सा, बारामा थप तीनजना सङ्क्रमित थपिए
प्रस, वीरगंज, १७ वैशाख/ पर्सा र बारामा गरी थप तीनजनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। वीरगंज महानगरपालिका वडा नं ३ का सफाइ कर्मचारीमा सङ्क्रमण फेला परेपछि यात्रा र व्यक्ति सम्पर्क विवरणको आधारमा सङ्कलन गरिएको ९४ जनाको स्वाब परीक्षणबाट वीरगंजका एकजना र बाराका दुईजनामा पिसिआर परीक्षण पोजेटिभ देखिएको हो। वीरगंज वडा नं ३ छपकैया निवासी सफाइ कर्मचारीमा सङ्क्रमण देखिएपछि उनको यात्रा विवरण अनुसार उनीसमेत भारतको दिल्लीस्थित निजामुद्दीन मरकजमा जाने चारजना जमातीमध्ये आज बाँकी तीनजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। तिनीहरूलाई नारायणी कोभिड अस्पताल ल्याइएको छ। फेला परेका तीनजनामध्ये एकजना वीरगंज महानगरपालिका छपकैया निवासी हुन् भने दुईजना बारा जिल्लाको सिम्रौनगढ नपा र जीतपुरसिमरा उपमहानगरका बासिन्दा हुन्। वैशाख १४ र १५ गते सङ्कलन गरी पठाएको स्वाबको पिसिआर परीक्षण रिपोर्ट राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट वैशाख १७ गते बुधवार आएको हो। सो रिर्पोटमा सफाइकर्मीको दोस्रो रिर्पोट पनि पोजेटिभ देखिएको छ। नारायणी कोभिड अस्पतालमा योसमेत आठजना कोभिडका सङ्क्रमित आइसोलेशन वार्डमा भर्ना भएका छन्। सर्लाहीका
सील क्षेत्र र माईस्थानमा खाद्यान्न बिक्री खुला
प्रस, वीरगंज, १७ वैशाख/ प्रशासनले सील क्षेत्र र माईस्थान क्षेत्रमा पनि तोकिएको समयमा पसलहरू सञ्चालन गर्न दिएको छ। चैत २९ गतेदेखि सील भएको वीरगंज महानगरको १, २, ३ र १६ वडामध्ये वडा नं. ३ र १६ मा वैशाख १४ गते दुईजना सङ्क्रमित भेटिएपछि सो सील क्षेत्रमा थप कडाइ गरिएको छ। सील क्षेत्रमा रहेका मुस्लिम समुदायको रमजान पर्व चलिरहेकोले सो क्षेत्रमा अहिले प्रशासनले किनमेलका लागि बिहान ११ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म खुकुलो गरेको छ। सील क्षेत्रमा कडाइ गरेपछि रमजानमा रोजा बसेको मुस्लिम समुदायलाई अप्ठेरो परेको थियो। बुधवार सील क्षेत्रमध्ये वडा नं. २ मा थप एकजना सङ्क्रमित फेला परे पनि प्रशासनले दूध र खाद्यान्न खरीदको लागि मानिसहरूलाई आवतजावतमा सुविधा दिएको छ। माईस्थान क्षेत्र पनि खुकुलो एक सातादेखि वीरगंजको अतिव्यस्त मीनाबजार, माईस्थान क्षेत्रमा खाद्यान्न, तरकारी बिक्रीमा रोक लगाएको प्रशासनले बुधवारदेखि माईस्थानमा खुकुलो गरेको छ। प्रशासनले सो क्ष्Fेत्रका मानिसहरूलाई होम डेलिभरीबाट सेवा पु¥याउन पहल गरेपनि होम डेलिभरी सेवा सफल नहुँदा खुकुलो गरिएको हो। होम डेलिभरी गर्ने जिम्मेवारी पाएका एकजना पस
धानको बीउ नपाउँदा किसान समस्यामा
ओमप्रकाश चौधरी, सेढवा, १७ वैशाख/ लगातारको लकडाउनका कारण वर्षेबाली धानको बीउ नपाउँला कि भन्ने ग्रामीण किसानहरूलाई चिन्ता छ। लकडाउनले नेपाल–भारत सीमा पनि बन्द छ। पर्साको ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाहरूको नेपाली धानको बीउसम्म पहुँच छैन। उनीहरू प्रत्येक वर्ष सीमावर्ती भारतीय बजारबाट धानको बीउ ल्याउने गर्थे। यस वर्ष भारतीय सीमा बन्द भएपछि किसानहरू चिन्तित बनेका हुन् । साउन महीनाको पहिलो सातादेखि शुरू हुने रोपाइँका लागि २५ दिनदेखि एक महीनाको बीउ चाहिन्छ। त्यसको लागि ब्याडमा बीउ राख्न उन्नत बीउको जोहो गर्ने बेला भइसकेको किसानहरू बताउँछन्। ग्रामीण किसानहरू स्थानीय बजारमा बीउ खोजिरहेका छन्। तर बजारमा बीउ उपलब्ध नभएको पटेर्वासुगौली–३ का धान किसान सुभाष चौधरीले बताए। नेपाली बजारमा भारतीय बीउ तथा कीटनाशक औषधि आपूर्ति नभएकोले किसानहरू समस्यामा परेको चौधरीको भनाइ छ। वैशाखको अन्तिम सातामा सोना मन्सुली, भदैई मन्सुली तथा सोना सारो प्रजातिका बीउ राख्ने गरिन्छ। यता ठोरी गाउँपालिका वडा नं ५ ठूलो बाघमोर्चाका किसान अष्टबहादुर लोप्चनले रोपाइँ गरिसकेको बताए। उनले लकडाउनभन्दा पहिले नै हर्दीन
सेवा लिनेहरूले प्रहरीलाई पनि ठगे
प्रस, वीरगंज, १७ वैशाख/ लकडाउन अवधिमा भारतको रक्सौलबाट अत्यावश्यक औषधिहरू उपलब्ध गराइ सेवा पु¥याइरहेको प्रहरीसमेतलाई सेवा लिनेहरूले झुक्याएको समाचार छ। सानो पाइलाको सहकार्यमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साले लकडाउन शुरू भएदेखि भारतीय औषधिहरूको आवश्यकता परेकाहरूलाई सहयोग गर्दै आएको थियो। लकडाउन लम्बिएसँगै यो सेवालाई प्रहरीले जारी राखेको छ। प्रहरीले फोन माध्यमबाट औषधि माग गर्नेहरूलाई घर र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमार्फत औषधि उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। पछिल्लो चरणमा औषधिको माग गर्नेहरूले धोका दिन थालेपछि प्रहरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट यसको व्यवस्थापन शुरू गरेको छ। औषधि आवश्यक पर्नेहरूले हेल्पडेस्कमा फोन गर्ने परम्परा हटाएर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुगेर औषधिबापतको खर्च पेश्कीस्वरूप बुझाउनेहरूलाई मात्र सो सेवा उपलब्ध गराउन थालेको छ। जिप्रका पर्साले हेल्पडेस्कमा फोन गर्ने र औषधि आएपछि लिन नआउने सङ्ख्या बढेको कारण पेश्की लिन शुरू गरेको बताएको छ। पेश्की दिनेलाई प्रहरीले भर्पाइ दिने र औषधि आएपछि फोन सम्पर्क गरी औषधि उपलब्ध गराउने गरेको छ। जिप्रकामा औषधि माग गरी लिन नआउनेहरूको सङ
बाराका सङ्क्रमितहरू घरपरिवार र मदर्सामा बस्दै आएका थिए
प्रस, परवानीपुर, १७ वैशाख/ बारामा भेटिएका दुईजना कोरोना सङ्क्रमित भारतको तबलीगी जमातमा सहभागी भई नेपाल फर्केर छपकैयाको मक्की जामे मस्जिद, केही दिन घरपरिवार र मदर्सामा बसेपछि सिमराको क्वारेन्टाइनमा पुगेका थिए । जीतपुरसिमरा उपनपाका प्रमुख डा कृष्ण पौडेलका अनुसार जीतपुरसिमरा–७ जीतपुरका ४३ वर्षीय पुरुष दिल्लीबाट फर्केर वीरगंज–३ छपकैयाको मक्की जामे मस्जिदमा केही दिन बसेर जीतपुर घर फर्केपछि वैशाख ९ गते सिमरा क्वारेन्टाइनमा ल्याइएको थियो भने सिम्रौनगढ नगरपालिकाको हरिहरपुर बस्ने ३१ वर्षीय पुरुष दिल्लीबाट फर्केर केही दिन घरपरिवारमा बसेर जीतपुरसिमरा–१९ इनर्वासिरामा रहेको मदर्सामा बस्दै आएको अवस्थामा उनलाई वैशाख १४ गते सिमरा क्वारेन्टाइनमा ल्याइएको जीतपुरसिमराका प्रमुख डा पौडेलले बताए। सङ्क्रमित दुवैजनासहित क्वारेन्टाइनमा रहेका ९ जनाको थ्रोट स्वाब सङ्कलन गरी गत सोमवार पिसिआर परीक्षणको लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकु पठाइएकोमा बुधवार बिहान दुईजनाको पोेजेटिभ नतीजा आएको हो। मदर्सामा बस्ने सिम्रौनगढका पुरुष मौलाना हुन् भने उनले त्यहाँ बालबालिकालाई पढाउँदै आएका थिए । यता, स
ठोरीमा हुलाकी सडक निर्माण कार्य सुचारु
माधव तिमिल्सिना, ठोरी, १७ वैशाख/ वीरगंज–ठोरी हुलाकी सडक अन्तर्गत ठोरी गाउँपालिकाको क्षेत्रमा निर्माण कार्य सुचारु भएको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण बन्द रहेको हुलाकी सडक निर्माण कार्य मङ्गलवारदेखि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। सडक निर्माण सम्झौता अवधिको अन्त्यतिर सरकारले लकडाउन गरेपछि सडक निर्माणको काम अलपत्र परेको थियो । जीराभवानी गाउँपालिका र ठोरी गापाको साँधमा पर्ने चमरीहोलदेखि पश्चिमतर्फ ठोरी पर्सा र चितवनको साँध चौतारासम्म पर्ने ३० किलोमिटर सडक निर्माणको ठेक्का सकारेको कालिका/बानियाँ जेभीले काम सुचारु गरेको हो। ठोरीका स्थानीय मजदूरमार्फत् काम अघि बढाएको बानियाँ निर्माण सेवाका प्रतिनिधि उद्धव न्यौपानेले जानकारी दिए। भौतिक योजना तथा पूर्वाधार निर्माण मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा एवं ठोरी गाउँपालिका कार्यालयबाट अनुमति लिएर सडक निर्माण कार्य थालिएको न्यौपानेले बताए । ३० किलोमिटर सडकखण्ड अन्तर्गत हाल ५ ठाउँमा एकैसाथ काम भइरहेको जानकारी दिंदै उनले इन्जिनीयर, ड्राइभर र प्राविधिकबाहेकका जनशक्त
वन हेरालुले तस्कर समाते
प्रस, पर्सागढी, १७ वैशाख/ सबैया साझेदारी वनका हेरालु द्वारिका सहनीले वनगस्तीको क्रममा सोमवार काठसहित एकजना तस्करलाई नियन्त्रणमा लिएका छन्। पर्सागढी नगरपालिका–४ भेडाहा टोलनजीक हेरालु सहनीले काठसहित एकजनालाई नियन्त्रणमा लिन सफल भएको सबैया साझेदारीले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेमा सोही स्थान परशुरामपुरका असलम देवान छन्। दुईजनामध्ये एकजना फरार रहेको र उनीहरूले ३/३ क्युफिट सालको गोलिया राष्ट्रिय वनबाट चोरी गरी ल्याइरहेको अवस्थामा वन हेरालु सहनीले नियन्त्रणमा लिएका थिए। नियन्त्रणमा लिइएका तस्कर र काठसमेत सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प सोलखपुरको सहयोगमा सबैया साझेदारी वनको कार्यालयमा पु¥याइएको छ। फरार एकजनाको पहिचान भइसकेकोले खोजी भइरहेको सहायक वन अधिकृत फरमान मियाँले बताए।
निजी खर्चमा राहत वितरण
प्रस, पंचगावाँ, १७ वैशाख/ पर्साको पटेर्वासुगौली गाउँपालिका वडा नं १ सोनबर्साका हाजी नुरद्दीन मियाँ अन्सारीले निजी खर्चबाट १५० परिवारलाई राहत वितरण गरेका छन् । सो वडाका दलित, मुस्लिम, विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरिएको उनले बताए। राहत सामग्रीमा प्रतिपरिवार १३ किलो चामल, ३ किलो आलु, १ किलो दाल, १ किलो नून र प्याज १ किलो थियो। कार्यक्रममा वडा नं १ का अध्यक्ष फरमान मियाँ अन्सारी, नागरिक अगुवा हैदर मियाँ, अताहुर मियाँ अन्सारी, प्रहरी चौकी रङ्गपुरका प्रसनि ज्याहुल मियाँ अन्सारीलगायत सहभागी थिए।
केन्द्र सरकार प्रदेश २ मा फैलाउँदै छ कोरोना पिसिआर मेशिनको नाममा जनताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड
राधेश्याम पटेल, वीरगंज, १७ वैशाख/ केन्द्र सरकारले प्रदेश २ को लागि पठाएको चिनियाँ पोर्टेबल पिसिआर मेशिनले गलत रिपोर्ट दिन थालेपछि केन्द्र सरकारले प्रदेश २ मैं कोरोना महामारी फैलाइरहेको टिप्पणी हुन थालेको छ। केन्द्र सरकारले हतारमा डब्लुएचओ एवं राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुले सर्टिफाइड नगरेको मेशिन पठाएर प्रदेश २ का जनताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गरी कोरोना महामारी फैलाउन मदत गरेको प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमका विज्ञ तथा प्राविधिकहरूको आरोप छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरका निर्देशक रामविनय साहले लकडाउनको ३६ दिन बितिसक्दा पनि भरपर्दो मेशिन उपलब्ध नगराएको चर्चा गर्दै यस्तो आरोप लगाएका हुन्। “केन्द्र सरकारले हामीसँग विभेद गरेको छ, मिडियाको दबाबमा हतारहतार पिसिआर मेशिन पठायो, जुन बच्चाले खेल्ने झुनझुनाबाहेक केही होइन।” उनले भने–“लगातार गलत रिपोर्ट आउन थालेपछि गत शुक्रवारदेखि नै जनकपुरको ल्याबबाट पिसिआर परीक्षण बन्द गरेका छौं।” नेपाल र भारत दुवैतिर लकडाउन भएपनि भारतबाट नेपाली नागरिक पस्नेक्रम जारी छ। नेपालका ७ वटा प्रदेशमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्य
लकडाउनमा भारतबाट तस्करी बढ्यो
प्रस, पोखरिया, १७ वैशाख/ लकडाउनमा सीमावर्ती क्षेत्रमा तस्करी बढेको छ। नेपाली व्यापारीहरूले भारतबाट रात्रिकालीन अवस्थामा खाद्यान्नलगायतका सामग्रीहरूको तस्करी शुरू गरेका छन्। खासगरी भारतीय सीमा क्ष्Fेत्रको सिक्टा, इनर्वा, भेलाहीबाट नेपालको भिस्वा, जानकीटोला, पाँडेपुर, धोरे, सबैठवाका व्यापारीहरूले खाद्यान्नलगायतका सामग्रीहरू मोटरसाइकल, साइकलबाट रात्रिकालीन अवस्थामा ढुवानी गरिरहेका छन्। दुवैतर्फका सुरक्ष्Fाकर्मीहरूलाई प्रभावमा पारेर लकडाउनमा पनि तस्करी मौलाएको हो। भारतीय व्यापारीहरूले नेपालको सीमा क्षेत्रसम्म सामान पु¥याउने र त्यहाँबाट नेपाली व्यापारीहरूले ल्याएर बिक्री गर्ने गरेका छन्। पर्साको ग्रामीण क्षेत्रमा यसअघि पनि भारतबाट सामानहरू ल्याएर बिक्री गरिन्थ्यो। लकडाउनमा दुवैतर्फका प्रहरी पहिलो चरणमा कडाइका साथ प्रस्तुत भए तापनि पछिल्लो चरणमा उनीहरूले खुकुलो गरेका छन्। खुकुलो गर्नुको कारण आर्थिक प्रभाव पनि भएको एकथरीले आरोप लगाएको छ। राति १० देखि बिहान ४ बजेसम्म यो क्ष्Fेत्रमा निर्बाधरूपले तस्करी भइरहेको छ। खाद्यान्न महँगो हुँदै ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चित खाद्यान्न सकिएको
हतियार प्रहारबाट दुईजना घाइते
प्रस, पोखरिया, १७ वैशाख/ कालिकामाई गाउँपालिका वडा नं ५ बिरन्चीबर्वामा धारिलो हतियार प्रहारबाट दुईजना सख्त घाइते भएका छन्। स्थानीय बिकाउ ठाकुरले रक्सीसेवन गरी धारिलो हतियार प्रहार गर्दा सुजायत मियाँ र उनकी बुहारी सख्त घाइते भएकी हुन्। ठाकुर र मियाँ छिमेकी हुन् भने गत आइतवार उनीहरूबीच सामान्य घरायसी विवाद भएको थियो। विवाद साम्य भएपनि हिजो मङ्गलवार एक्कासि बिकाउ ठाकुरले रक्सीसेवन गरी मात्तिएपछि मियाँको घरमा पसेर गडासीले सुजायतको टाउको र उनकी बुहारीको पिठ्यूँमा प्रहार गरेका थिए। राति ८ः३० बजे ठाकुर मियाँको घरमा पसेर घारिलो हतियार प्रहार गरेपछि छिमेकीहरू जुट्दा ठाकुरले नलकटुवा निकाली स्थानीयलाई तर्साएका थिए। ठाकुर यसअघि पनि दर्जनौं चोरी र डकैतीका घटनामा संलग्न छन्। तत्कालीन माओवादी र मधेसवादी भूमिगत सङ्गठनको नाममा ठाकुरले विभिन्न व्यक्तिलाई धम्की दिएर लुटपाट गरेको प्रहरी रेकर्डमा दर्ता रहेको छ। घटनापश्चात् स्थानीय कालिकामाई इलाका प्रहरी कार्यालयको टोलीले ठाकुरलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। मियाँ र उनकी बुहारीलाई उपचारको लागि वीरगंज पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
जङ्गल सोतामा पानी भर्नेको घुइँचो
प्रमोद यादव, पचगावाँ, १७ वैशाख/ पटेर्वासुगौली गाउँपालिका वडा नं २ रङ्गपुरटाँडी राष्ट्रिय जङ्गलनजीकै भौरीमाई मन्दिर छेउबाट बग्ने भौरी सोताको पानी पिउनका लागि लिन आउनेहरूको भीड बढेको छ। जङ्गल सोता तथा भौरी खोलाको पानी पिएमा कोरोना नलाग्ने भनेर कोइलाभार मन्दिर र गादीमाई मन्दिरका पुजारीले सपना देखेको भन्ने चर्चा चलेपछि आसपासका बासिन्दाहरू सो स्थानको पानी लिन आउन थालेका स्थानीय वीरेन्द्र चौधरीले बताए। हल्लाको भरमा अहिले यस क्षेत्रका महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धासमेत दैनिक जङ्गल सोता तथा भौंरी खोलामा पिउने पानी भर्न धुइरो लागेका छन्। कोरोनाको सङ्क्रमण तथा लकडाउनको बेला एकाएक भीड बढेकोप्रति स्थानीय प्रशासन तथा जनप्रतिनिधिहरूले चासो नदेखाएको पटेर्वासुगौली निवासी आशु चौधरीले गुनासो गरेका छन्। सो सम्बन्धमा वडा नंं २ का अध्यक्ष विजय गैरले सयौंको सङ्ख्यामा मानिसहरू पानी भर्न जाने गरेको बताउँदै भ्रम निवारण तथा भीड नियन्त्रणका लागि आफूले दुई/तीन दिनदेखि प्रयास गरिरहेको बताए। उनले पानी भर्न जानेहरूलाई भ्रमको पछि नलाग्न आग्रह गर्नुका साथै उक्त स्थानमा प्रहरी पठाएर भीडलाई रोक्ने प्रयास
क्लबद्वारा राहत वितरण
प्रस, पर्सागढी, १७ वैशाख/ सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका वडा नं १ सखुवनियास्थित हिमशिखर युवा क्लबको आयोजनामा सखुनिया टोलका अतिगरीब, विपन्न, दलित २५० परिवारलाई राहत वितरण गरिएको छ। प्रतिपरिवार चामल पाँच किलो, आलु एक किलो, दाल एक किलो, नून एक किलो, तेल आधा लिटर, नुहाउने साबुन एउटा वितरण गरिएको छ। राहत वितरणमा क्लबका अध्यक्ष हरेन्द्र महतो चौधरी लकडाउनको कारण दैनिक ज्यालादारी गर्ने मानिसलाई खान समस्या नहोस् भनी क्लबले सहयोग गरेको बताए । राहत दिंदा सामाजिक दूरी कायम गरिएको, सहभागीहरूलाई साबुनपानीले हात धुन लगाएको र सफाइमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरिएको अध्यक्ष चौधरीले बताए।
थरुहट सडकमा कल्भर्ट भत्कँदा समस्या
नरेश यादव, पर्सागढी, १७ वैशाख/ पर्सागढी नगरपालिकाको वडा नं. ३ र ४ को बीचमा थरुहट सडकमा रहेको कल्भर्ट भत्किएपछि चार पाङ्ग्रे सवारीसाधनको आवागमन कठिन भएको छ। जनता सडकसँग जोडिएको यो बाटो थरुहट सडक हो। यो सडक पर्सागढी हुँदै सखुवाप्रसौनी र त्यहाँभन्दा पश्चिम ठोरीसम्मका बासिन्दाले प्रयोग गरिरहेका छन्। लकडाउनको कारण सवारीसाधन कम चलिरहेको भएपनि एम्बुलेन्स र कृषि कर्मका सवारीसाधनहरूको आवतजावतमा समस्या भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ।
प्रस, वीरगंज, १७ वैशाख/ वीरगंज महानगरपालिकाले सहयोगप्राप्त १० थान पिपिई नारायणी अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेको छ। प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासङ्घको समन्वयमा आनी छोइङ डोल्मा फाउन्डेशन र प्रारम्भ नेपाल ललितपुरले वीरगंज महानगरका प्रमुख विजयकुमार सरावगीलाई १० थान पिपिई किट सेट उपलब्ध गराएको थियो । सो पिपिई सेटलाई नगरप्रमुख सरावगीले नारायणी कोभिड अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेको वीरगंज महानगरका अधिकृत विनोद मिश्रले जानकारी गराएका छन्।
लक्षणविनाको निमोनियाले लिंदैछ सङ्क्रमितको ज्यान
अमेरिकामा ३० वर्षदेखि आकस्मिक सेवासँग जोडिएका डा रिचर्ड लेविटनले मृत्युको ठूलो कारण बताएका छन्। उनले भने, “म तीस वर्षदेखि आपत्कालीन चिकित्सामा काम गरिरहेको छु। सन् १९९४ मा मैले इन्ट्युबेशनमा एउटा इमेजिङ सिस्टम बनाएको थिएँ। रोगीको श्वसन नलिकामा राख्ने यस प्रक्रियाबारे गहन अध्ययन भयो। हालै, जब न्यूयोर्कको अस्पतालमा रोगीको बाढी देखें, तब म बेलेभ्युस्थित अस्पतालमा स्वेच्छाले काम गर्न थाले। यस क्रममा महसूस भयो कि हामी कोरोना भाइरसबाट हुने निमोनिया चाँडै पत्ता लगाउन सकिरहेका छैनौं र रोगीलाई जीवित राख्न तीव्र गतिले काम गर्नुपर्छ। हामीले यो थाहा पाएपछि अचम्ममा प¥यौं कि लक्षणविनाको निमोनियाले सङ्क्रमितको ज्यान लिंदैछ। जिन्दगीमा पहिलोपटक आपत्कालीन कक्षमा एकै प्रकारका बिमारी भएको व्यक्ति यति धेरै सङ्ख्यामा देखें। सबैलाई कोभिड–१९ जनित निमोनिया थियो।” पहिलो दिन, पहिलो घण्टामा नै मैले दुईजना रोगीमा श्वसन नलिका लगाउनुप¥यो । साँस फेर्न समस्याको अलावा काँधदेखि टाउकोमा चोट खाएका रोगीको सिटी स्क्यानमा पनि निमोनिया पाइएको थियो। कैयौं बुजुर्ग सङ्क्रमित अज्ञात कारणले मरे। के हो साइल
बलिउड कलाकार इरफानको निधन
बलिउडका चर्चित अभिनेता इरफान खानको निधन भएको छ। मङ्गलवार उनको स्वास्थ्य बिग्रिएपछि मुम्बईको कोकिलाबेन अस्पतालको आइसियूमा भर्ना गरिएको थियो। इरफान खान लन्डनबाट एक वर्षसम्म उपचार गराइ मार्च २०१९ मा भारत फर्किएका थिए। त्यसपछि उनी कोकिलाबेन अस्पतालका चिकित्सकको रेखदेखमा उपचार र रूटीन चेकअप गराइरहेका थिए । भनिन्छ, अङ्गे्रजी मिडियम चलचित्रको छायाङ्कनको क्रममा उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिन्थ्यो। कैयौंपटक युनिटले छायाङ्कन रोक्नुपथ्र्यो। इरफानको स्वास्थ्य अवस्था ठीक भएपछि पुनः चलचित्रको छायाङ्कन गरिन्थ्यो। हालै उनको आमा सइदा बेगमको जयपुरमा निधन भएको थियो। लकडाउनको कारण इरफान आफ्नो आमाको अन्तिम यात्रामा सहभागी हुन सकेनन्। उनी भिडियो कलको माध्यमबाट आमाको शवयात्रामा सहभागी भएका थिए। ५४ वर्षीय इरफान न्युरोएन्डोक्राइन ट्युमरबाट पीडित थिए। दुई वर्ष पहिले मार्च २०१८ मा इरफानले आफ्नो रोगबारे थाहा पाएका थिए। यसबारेमा उनले ट्वीटबाट जानकारी गराएका थिए। –प्रतीक डेस्क (एजेन्सीको सहयोगमा)
संसारको पहिलो घडी
संसारको सबैभन्दा पहिलो घडी पोमैन्डर वाच अफ १५०५ वा वाच १५०५ को नामले चिनिन्छ। यसलाई जर्मन आविष्कारक पिटर हेनलेनले बनाएका थिए र उनलाई नै पहिलो घडी निर्माता मानिन्छ। पिटर हेनलेनले यस घडीलाई करीब ५१५ वर्षअघि अर्थात् सन् १५०५ मा बनाएका थिए। स्याउ आकारको पोमैन्डर घडीको कथा निकै रोचक छ। भनिन्छ, सन् १९८७ मा घडी बनाउने एक युवकले लन्डनको कबाडी बजारबाट १० पाउन्डमा पोमैन्डर किनेका थिए तर उनलाई थाहा थिएन कि यो दुनियाँको पहिलो घडी हो। उनले त्यस घडीलाई निकै वर्षसम्म राखे र सन् २००२ मा उनले कसैलाई त्यो घडी बेचिदिए। जसले यो घडी किनेका थिए, उनले पनि घडी अर्कैलाई बेचिदिए । अन्ततः जब पोमैन्डर घडी एकजना शोधकर्ताको हात प¥यो, तब यसले संसारको पहिलो घडीको पहिचान पायो। यो घडीमा बनाउने वर्ष पनि लेखिएको छ र त्यसमा आविष्कारक पिटर हेनलेनको हस्ताक्षर पनि छ। भनिन्छ, यो घडी पिटर हेनलेनको निजी घडी थियो, जुन उनले सदैव आफूसँग राख्दथे। दुनियाँको सबैभन्दा पहिलो घडीको विशेषता भनेको यो कपर र सुनबाट बनेको छ । आजको समयमा यस घडीको मूल्य ५० देखि ८० मिलियन डलर पर्छ। यो अनुमान सन् २०१४ मा अमेरिकाको चर्चित एन्टिक व
मानिस हो, जे पनि गर्छ
नेपालमात्र होइन, विश्व नै कोरोनाको महामारीबाट जुध्दैछ। कोरोनाको यस महामारीबाट जोगिन एकथरी मानिस आफूलाई कोरोनाको इन्जेक्शन लगाइ कोरोना सङ्क्रमित बनाएर प्रतिरोधी औषधि प्रयोग गर्ने अवसर जुटाइदिन तत्पर छ। एकथरी मानिस आफ्नो गाँस काटेर भएपनि लकडाउनले गर्दा खान नपाएका मानिसको पेट भर्ने जोहो गर्न छटपटाइरहेको छ। एकथरी मानिस यत्रो सरुवा रोगको परवाह नगरी सङ्क्रमितको उपचारमा जुटेको छ। अहिलेसम्म उपचार नै नभएको कोरोनाको भयलाई मनबाट निकालेर सुरक्षाकर्मीहरू रापिलो सडकमा लकडाउन सफल बनाउन कटिबद्ध भएर खटेका छन्। जसमा जुन सीप छ, ऊ त्यसैबाट, आजको समयको माग पूरा गरिरहेको छ। रोगको डर नमानी कृषक खेतमा काम गरिरहेको छ, उपभोक्ता साथै परिवारको गर्जो टार्न एकथरी मानिस गली–गल्छेडो पुगेर उपभोग्य सामग्री आपूर्ति गरिरहेको छ। त्यही अर्कोथरी मानिस पनि देखिएको छ, जो यस महामारीको आगोमा आफ्नो हात सेक्ने काम गरिरहेको छ। एकथरीले कोरोना उपचारका लागि आफ्नो अस्पताल निश्शुल्क प्रदान गरेको छ भने अर्कोथरी अस्पताल शुल्क लिएर पनि सेवा गरिरहेको छैन। यस युगका महान् वैज्ञानिक आइन्स्टाइनले एक बखत भनेका थिए– मानिस देवताभन्दा पनि
श्रमिकहरूको वर्तमान र अबका दिन
सञ्जय साह मित्र जसले श्रम गर्दछ, ऊ श्रमजीवी हो, श्रमिक हो। पुरानो दृष्टिकोण यो थियो कि जो उद्योगमा काम गर्दछ, उही श्रमिक हो। तर सन् १८४८ देखि यस धारणामा परिवर्तन आयो। विश्वका सबै मजदूर एक हौं भन्ने नाराले उद्योगका मजदूरलाई प्राथमिकता त दियो साथै कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूरलाई पनि उत्तिकै मान्यता दियो। सामान्यतया युरोपमा औद्योगिक क्रान्तिपछि विश्वमा उद्योगपति अर्थात् मालिक र मजदूर भनी औपचारिकरूपमा विभाजन भएको मानिन्छ। तर अनौपचारिकरूपमा अनादिकालदेखि चलिआएको मान्यता हो । मानिसमा अहम्को विकास भएदेखि नै एकले अर्कालाई हेप्न शुरू भएको हो । एउटा हेपिने र अर्को हेप्ने भएपछि मानिसमा नौलो विभाजन भएको हो। यही प्रक्रियाले निरन्तर विस्तार पाउँदै गएर मानिसमा अनेक किसिमका विभेदको सिर्जना गर्दै गएको हो, जसमध्ये एउटा श्रमिक वर्ग र अर्को श्रम गराउने वर्ग पनि हो। श्रमिकले श्रम गर्दछ र उसले श्रमको मूल्य पाउनुपर्दछ। श्रम गर्ने ठाउँमा उसको सम्मान हुनुपर्दछ। यदि श्रमिकले काम गर्दा कुनै दुर्घटना हुन्छ भने त्यसको पनि क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ। श्रमिकले काम गर्दा आराम पनि पाउनुपर्छ। आठ घण्टा काम
२०७७ वैशाख १७ गते बुधवारको प्रतीक दैनिक
माईस्थान सील क्षेत्रबाहेकमा चहलपहल
प्रस, वीरगंज, १६ वैशाख/ वीरगंज महानगरपालिकाको सील गरिएका क्षेत्रबाहेक अन्यत्र अत्यावश्यक सामानहरूको खरीदारीमा खुकुलो गरिएको छ। चैत २९ गतेदेखि सील गरिएका वडाहरू १, २, ३ र १६ बाहेक अन्य वडाहरूमा अत्यावश्यक सामानको खरीदारी तोकिएको समय बिहान ११ देखि ३ बजेसम्म खुकुलो पारिएको छ। मानिसहरू खाद्यान्न खरीदको लागि यो समयमा शहरको तोकिएका पसलहरूमा मापदण्ड अनुसार भीड लाग्ने गरेका छन्। वडाका भित्री भागहरूमा रहेका पसलहरू सञ्चालनमा रहेकाले त्यहाँ नपाइने सामानहरू शहरको बिर्ता, अलखियारोड, आदर्शनगर, गीतामन्दिर, घण्टाघर, मुर्ली, श्रीपुर क्षेत्रमा खरीद गर्नेहरूको भीड हुने गरेको छ। सामाजिक दूरी बनाएर पसलमा सामान खरीद गरिरहेका छन्। यसैगरी, लकडाउन अवधि बढेसँगै वीरगंज बजारमा अन्य पसलहरू पनि बिस्तारै खुल्नेक्रम जारी छ। बिर्तादेखि श्रीपुरसम्म दिउँसो मानिसहरूको चहलपहल बढेको छ। घण्टाघरस्थित विपी पार्कमा मात्र ट्राफिकले सवारी जाँच गरिरहेको छ। त्यसबाहेकका क्षेत्रमा मोटरसाइकल, साइकलको सङ्ख्या बिस्तारै बढिरहेको छ। अस्पताल, बैंकमा मोटरसाइकलको भीड देख्न सकिन्छ। माईस्थान र सील क्षेत्रमा कडाइ वीरगंजको माईस्था
रौतहटमा दुईजनामा कोरोना सङ्क्रमण
प्रस, रौतहट, १६ वैशाख/ रौतहटमा दुईजनामा कोरोना सङ्क्रमण भएको चन्द्रपुर अस्पतालले जनाएको छ। वृन्दावन नगरपालिका–९ निवासी २५ वर्षीय पुरुष तथा देवाही गोनाही–१ का ३५ वर्षीय एक पुरुषमा सङ्क्रमण भएको बताइएको छ। चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नं ६ स्थित क्वारेन्टाइनमा बसेर वैशाख ६ गते घर फर्काइएका वृन्दावन नगरपालिकाका पुरुषमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको चन्द्रपुर अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा श्यामबाबू साहले बताए । प्रादेशिक ल्याब जनकपुरबाट पिसिआर रिर्पोट नेगेटिभ आएपछि घर फर्काइएका उनको स्वाब केन्द्रीय प्रयोगशालामा पुनः परीक्षण गर्दा पोजेटिभ आएको हो। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय गौरका निमित्त प्रमुख महेश साहका अनुसार देवाही गोनाहीका सङ्क्रमित पुरुष भने क्वारेन्टाइनमैं छन्। अब दुवै सङ्क्रमितहरूको कन्ट्याक ट्रेसिङ गरिने उनले बताए। अस्पतालका अनुसार देवाही गोनाही ती पुरुष लकडाउन शुरू भएपछि कोलकाताबाट आएका र उनी लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गरेका थिए। त्यस्तै, वृन्दावन नगरपालिकाका पुरुष पनि लकडाउनपछि भारतबाट लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गरेका थिए।
ज्येष्ठ नागरिकद्वारा आर्थिक सहयोग
प्रस, वीरगंज, १६ वैशाख/ वीरगंज महानगरको कोभिड कोषमा ज्येष्ठ नागरिक सङ्घ, पर्साले आर्थिक सहयोग गरेको छ। ज्येष्ठ नागरिक सङ्घ, पर्साका अध्यक्ष्F जगदीशप्रसाद शर्माले कोषका संयोजक नगरप्रमुख विजयकुमार सरावगीमार्फत् कोषमा रु २५ हजार नगद सहयोग गरेका हुन्। मङ्गलवार एक कार्यक्रमबीच अध्यक्ष शर्माले नगरप्रमुख सरावगीलाई उक्त नगद हस्तान्तरण गरेका थिए।
स्वाब लिन गएका स्वास्थ्यकर्मी खाली हात फर्के, स्थानीयले गरे अवरोध
प्रस, परवानीपुर, १६ वैशाख/ वीरगंजमा थपिएका दुईजना कोरोना सङ्क्रमितमध्ये एकजनाको घर हो, वीरगंज–१६ इनर्वा। वीरगंज–२ घुसुकपुरभन्दा दक्षिण यस गाउँका ४९ वर्षीय एकजना पुरुषमा कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि स्वास्थ्य कार्यालय, पर्सा र नारायणी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरूको टोली आइतवार राति ८ बजे थ्रोट स्वाब सङ्कलन गर्न पुग्यो। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ अन्तर्गत उनको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएका घरपरिवारका १४ जनालाई लक्षित गरी स्वाब सङ्कलन गर्न पुगे तापनि स्थानीयको अवरोधको कारण उनीहरू खाली हात फर्के। स्वास्थ्य कार्यालय पर्साका जनस्वास्थ्य निरीक्षक जयमोद ठाकुरका अनुसार स्थानीयको अवरोधको कारण स्वाब सङ्कलनमा समस्या उत्पन्न भएपछि टोली फिर्ता आयो। “हामीलाई घरपरिवारका १४ जनाको थ्रोट स्वाब लिन पठाइएको थियो, तर स्थानीयले टोलभरिका सयजनाको थ्रोट स्वाब सङ्कलन गर्न जिद्दी गर्न थाले,” उनले भने, “गाउँमा भीड हुन थालेपछि प्रहरीसँग सम्पर्क गर्न खोजिएको थियो तर फोन नलागेपछि खाली हात फिर्ता आउनुप¥यो।” उनले टोलीसँग गएका दुईजना सुरक्षाकर्मीको सहयोगले त्यहाँबाट सुरक्ष्Fित आउन सकेको बताए। कोरोना सङ्क्रमितको घरपरिवारको मात
दुईवटा वडामा नमूना सङ्कलन जारी
प्रस, वीरगंज, १६ वैशाख/ वीरगंज महानगरका दुईवटा वडामा वैशाख १४ गते दुईजना कोरोना पोजेटिभ फेला परेपछि ती वडाहरूमा स्वाब परीक्षणको लागि नमूना सङ्कलन मङ्गलवार पनि जारी रह्यो। वडा नं. ३ को छपकैयाबाट आइतवार र सोमवार ९४ जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय, पर्साका जयमोद ठाकुरले बताए। यसैगरी, मङ्गलवार वडा नं. १६ को इनर्वा गाउँमा स्वाब सङ्कलन भइरहेको उनले जानकारी गराएका छन्। नारायणी अस्पतालका मेसु डा मदन उपाध्यायले यात्रा विवरणका आधारमा सङ्क्रमित परिवार र तिनीहरूसँग सम्पर्कमा रहेका मानिसहरूको स्वाब सङ्कलन भइरहेको बताए। उनले स्वाब परीक्षणका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा नमूना पठाएको बताए। प्रादेशिक प्रयोगशाला हेटौंडाको क्षमताले नभ्याएपछि स्वाब परीक्षणको लागि टेकु पठाइएको उनले बताए। यसअघि हेटौंडाबाट नारायणी अस्पतालले स्वाब परीक्षण गराउँदै आएको थियो। टेकुमा पठाइएको कारण परीक्षण रिपोर्ट आउन ढिला भएको उनले बताए। आइसोलेशन वार्ड थपिंदै नारायणी अस्पतालमा आइसोलेशन वार्ड थप भइरहेको मेसु डा उपाध्यायले बताएका छन्। उनले ५ वार्डको आइसोलेशनबाट थप गरी २५ बनाइएको र सङ
लकडाउन बढेसँगै निश्शुल्क भोजन गराउने संस्थाहरू बढ्दै
प्रस, वीरगंज, १६ वैशाख/ चैत ११ गतेदेखि निरन्तररूपमा लकडाउन लम्बिएसँगै वीरगंज महानगरमा निश्शुल्क भोजन गराउनेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै छ। दैनिक गुजारा गर्न अप्ठेरो भएका समूह, वर्गलाई लक्षित गरेर वीरगंजमा एकपछि अर्को निश्शुल्क भोजन गराउनेहरू सक्रिय भएका छन्। लकडाउन शुरू भएको चैत ११ गतेदेखि नै निरन्तररूपमा नारायणी अस्पतालका कुरुवाहरूलाई भोजन गराउँदै आएका वडा नं. ४ का अध्यक्ष्F जगत साह कानूले वैशाख १५ गतेदेखि स्थगित गरेका छन्। उनले नारायणी अस्पताल कोभिड अस्पतालमा परिणत भएपछि त्यहाँ बिरामी नभएको कारण स्थगित गरिएको बताए। उनले चिकित्सकहरूले माग गरेको खण्डमा खाना पु¥याइने बताएका छन्। तर वडाबाट वितरण हुने निश्शुल्क खाना भने जारी रहेको वडाध्यक्ष कानूले बताए। वडा कार्यालयबाट दैनिक ५० भन्दा बढी मानिसलाई निश्शुल्क भोजन गराउँदै आएको उनले बताए। बिहान–बेलुकी सामाजिक दूरी बनाएर निश्शुल्क भोजनलाई निरन्तरता दिएको बताएका छन्। यसैगरी, वीरगंजमा सद्भाव समितिले पनि निश्शुल्क भोजनलाई निरन्तरता दिंदै आएको छ। अहिले घरबाटै मागबमोजीम डेढ सयदेखि दुई सयजनालाई निश्शुल्क भोजन गराइरहेको सद्भाव समितिका र
कालिका कन्स्ट्रक्शनले काम शुरू ग¥यो
प्रस, वीरगंज, १६ वैशाख/ कालिका कन्स्ट्रक्शनले मङ्गलवारदेखि वीरगंज महानगरमा पनि निर्माण कार्य शुरू गरेको छ। कालिका कन्स्ट्रक्शनका प्रबन्धक ठाकुर ढकालले आजदेखि निर्माण कार्य शुरू गरिएको जानकारी गराएका छन्। उनले चैत ११ गते लकडाउन शुरू भएदेखि बन्द भएको निर्माण कार्य सरकारको निर्देशनमा देशका विभिन्न स्थानमा सुचारु भएपछि वीरगंजमा पनि कालिका कन्स्ट्रक्शनले सरकारी निर्देशन पालना गरेर लकडाउनमा परिपालना गर्नुपर्ने नियमहरूभित्र रही काम शुरू गरेको बताए। उनले बिहान ११ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म लकडाउन अवधिमा निर्माण कार्य शुरू गरिएको बताएका छन्। खाना खुवाएर कन्स्ट्रक्शनको वीरगंज–१५ लक्ष्मणवास्थित साइटमा रहेका करीब २५ जना मजदूरलाई पिपिई, मास्क, ग्लब्स, सेनिटाइजरको प्रयोग गराइ निर्माण कार्य शुरू गराएको उनले बताएका छन्। खाना खाएपछि चालकहरूलाई आआफ्नो सवारीसाधनमा रहने गरी र मजदूरहरूलाई पनि आआफ्नो साइटमा खट्ने गरी दिनभरि आवश्यक पानी, खाजाको व्यवस्थापन गरिएको उनले बताए। सामाजिक दूरी बनाएर विकास निर्माणका कार्यलाई निरन्तरता दिन खोजिएको प्रबन्धक ढकालले प्रतीकलाई जानकारी गराएका छन्। एडिबीको सहय